Imephu yeBentley ifuna ukuba ufudukele kwiV8i-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-Bentley Imephu ufuna ukuba ufuduke kwiV8i
I-Bentley Imephu ufuna ukuba ufuduke kwiV8i
Bentley iye yasungula iphulo ngamandla ukwenza Geographics abasebenzisi Microstation zigqithiswe V8i, kuba linika amaxabiso ezizodwa kunye unxibelelwano olumandla iinzuzo ukuba umntu ukuze afumane kwi Bentley Map kuthelekiswa kontanga yayo.
1. Ukuhlanganiswa kwe-CAD kunye ne-GIS
2. Bopha amandla e-geospatial e-Oracle
3. Sebenza kunye ne-Oracle Spatial okanye iseva ye-GIS
4. Ukwandisa ukusebenzisana kwe-GIS yakho
5. Ukulungiswa okukhulu kunye nomntu wokwenza umsebenzi
6. Ukujonga imephu ngaphandle kweengxaki
7. Ukusebenza kakuhle kweGIS
8. Ukudala nokushicilela imephu ngokulula
9. Imveliso ebonakalayo kwimarike; yamkelwa ngokubanzi
10. Ukukhushulwa kufumaneka ngezibonelelo ezibalulekileyo.
Bentley uqalisa kubo bonke abasebenzisi abonwabileyo kunye neenguqulelo zazo pre-XM (V8.9) kwaye uzive imfuneko ukwenza utyalo-mali okanye ubuncinane ula- yabo ngesiliva.
I-MicroStation GeoGraphics J
I-MicroStation GeoGraphics 5.7 ... uuuuy !!!! oku kufuneka kube ngu-SE
I-MicroStation GeoGraphics V8
I-MicroStation GeoGraphics V8.1, ndicinga ukuba i8.5
Okwangoku banike isaphulelo sama-40% ekuthengweni kwamaphepha-mvume de kube nguJulayi 30, 2009. Akukubi kodwa kuya kufuneka benze umsebenzi onzima ekunxibelelaneni nasekuboneleleni ngoncedo ukuze batsibe; Okwangoku, i-e-seminar (iyure e-1) ibhengeziwe phakathi kuka-Epreli noMeyi ejolise kubasebenzisi be-Hispanic Geographics ukubona izibonelelo zeMephu yeBentley. Sikwabona ukonyuka kwemikhankaso yentengiso nge-AdSense, kwaye nakwiisemina ngesiNgesi (ezihambele phambili kune-Hispanics) bezinikela ukuthumela iphedi yemouse kubasebenzisi ababhalisela le semina.
Ngaphandle kwexabiso leelayisenisi, indleko yokubonisana nokufuduka kwedatha, ukulungelelanisa uphuhliso, ubuyekeze izicelo ... luyinkimbinkimbi.
Ayisiyiyo yonke into ekuthengweni kwelayisensi, kuyacaca ukuba kufuneka ufumane inkonzo YOKUKHETHA okanye ubuncinci intengiso isitsho njalo. Kwaye ngaba oko kuchaphazela ukufuduka yeprojekthi ilula ngokuxhomekeke kwizinto ezintle ezenza i-platform entsha inxulumene ne-wms, topology kunye U mboniso qi niseka
Kodwa njengoko ndithethile ngaphambili, ubunzima It is on data kunokuba mslinks elula nge OLEDB kufuneka ngoku yaye izicelo XML olungisiweyo kufuneka iqulunqe ... kunye ukuhlanganiswa ProjectWise ukuba abe, Geoweb Umshicileli, Oracle Spatial okanye Server ArcGIS Spatial iCartridge.
Qhagamshela kwidatha, Imephu ye-AutoCAD - Imephu yeBentley